Fepetra Ho An’ny Aterineto Vaovao Ao Shina : Raisina Ho Toy Ny Fitaovana Fikomiana Ny Solonanarana sy ny Solontsary (Avatars) · Global Voices teny Malagasy
Vakio amin'ny teny English, English, Español, Italiano, Français, 繁體中文
Sangy noforonin'i Ellery Roberts Biddle hanoherana ny hetsika Elo.
Lahatsoratra nasiam-panovàna izy ity, niainga avy amin'ny tafa iray niarahana tamin'i Wu Tun, tomponà toeram-pivarotana iray ety anaty aterineto izay noterena nasaina nakaton'ny Taobao tamin'ny Novambra2014. i Yi Que Tang no nitantana ny tafa izay navoaka voalohany tamin'ny teny Shinoa tao amin'ny pao-pao.net. Mandy Wong no nanao ny dika amin'ny teny Anglisy ary navoaka sy naverina navoaka indray eto amin'ny GV noho ny fifanarahana fifampizaràna votoaty.
Faritan'ny lalàna vaovao momba ny aterineto ao Shina ho heloka bevava ny fampiasàna anarana natao ho an'ny efijery fiseraserana sy solontsary ety amin'ny aterineto izay heverina ho mandika ireo lalàna misy, manohintohina ny filaminam-pirenena, na manala baràka ny hafa.
Andro vitsy nialoha ny nampanan-kery ilay fepetra vaovao tamin'ny 1 Martsa, maherin'ny 60.000 ny kaontin'ireo mpampiasa aterineto no nofafàna tany anatin'ireo sehatra media sosialy tena fampiasa. Maherin'ny 7.000 no nofafàna tamin'ny Martsa, volana voalohany nampiharana ireo didy.
Nampiditra fepetra vaovao i Shina mba fametrahana faneriterena amin'ny fampiasàna solonanarana sy solontsaryety anaty aterineto. Sary an'i Jason Ng's Kenengba. Lisansa ho an'ny fampiasàna tsy itadiavana vola.
Ny 4 Febroary, navoakan'ny biraom-panjakana misahana ny fampitam-baovaon'ny aterineto ao Shina ny Fepetra amin'ny Fitantanana ny Kaontin'ireo Mpampiasa Aterineto, izay lisitra ahitàna teboka sivy fameperana mikasika ny anarana ety anaty efijery ho an'ireo mpampiasa aterineto. Nampidirina hanan-kery ilay didy mba ho ampahany amin'ireo fameperana midadasika be napetraka hifehy ny momba ny maha-izy azy ny mpampiasa aterineto ao Shina — takiana izao ny tsy maintsy hisoratan'ireo mpampiasa amin'ny tena anarany. Na dia mety mbola hampiasa solontsary na sary nasiam-panovàna aza ry zareo, dia mila manaraka izany mba hifanaraka amin'ilay politika vaovao.
Mety hiteraka olana ho an'ny maro mampiasa aterineto ao Shina io. Matetika ireo mpisera amin'ny aterineto izay manana fijoro ara-polotika mazava no mampiasa solonanarana ety anaty efijery, solontsary na sary lafika amin'ny satan'ny pejin'ny media sosialiny mba ho entina milaza fanambaràna politika. Ohatra, mazàna ireo mpisera izay mino ny soatoavina erantany no manampy “MZ” (fanafohezana nalaina avy amin'ny Minzhu, midika demaokrasia amin'ny teny Anglisy) any anatin'ny ID. Nandritry ny fandosiran'ilay lehilahy jamba mpikatroka mafàna fo amin'ny fiarovana zon'olombelona, Chen Guangcheng (Chen nandositra nankao amin'ny masoivoho Amerikana tao Beijing tamin'ny 2012), samy nanova ny solonanarany daholo ireo mpomba azy ho “Mila ny Guang [Hazavana] sy Cheng [Fahatsorana]”. Manana anjara asa tahaka izany ihany koa ny solontsary. Nandritry ny Hetsika Elo tao Hong Kong, nanova ny sary momba azy ireo mpanohana avy any amin'ny tanibe Shina ho lasa ny sary elo mivelatra famantarana ilay hetsika.
Amin'ny raharaha Wu Tun, raha nanaova ny momba azy i Wu ho lasa sarin'ny T-Shirt maneho ny fanohanany an'i Ai Weiwei, dia azo inoana fa ho nahantona noho ireo “fandraràna sivy” ao anatin'ilay fepetra vaovao momba ny kaontin'ireo mpampiasa aterineto ny kaontiny.
Azo adika ho fanaronana saiky ny zavatra rehetra mihitsy ireo fandraràna. Ohatra, iray amin'ireo fandraràna ny “fanelezana honohono sy fanelingelenana ny filaminan'ny daholobe.” Saingy izao kosa, iza no afaka hitsara raha honohono ny ampaham-baovao iray ao Shina? Ary ahoana no ahafahan'ny solontsary iray sy ny teny fampidirana ny tena ho “manelingelina ny filaminan'ny daholobe”? Fehezin'ireo manampahefana ny “fahefana farany afaka milaza ny dikan”ireo fandraràna ireo. Tsy ela akory izay ny teratany iray mpisera amin'ny aterineto avy ao amin'ny tanibe no namoaka tao amin'ny faribolan'ireo namany WeChat ny sary iray nokirainy tamin'ny photoshop, sarin'i Xi Jinping, ary nampanantsoin'ny polisy, izay niampanga azy ho “manelingelina ny filaminan'ny daholobe.”
Marobe ireo mpisera amin'ny aterineto no naneho ny ahiahiny momba ilay fandraràna mikasika ny “fikomiana amin'ny fahefam-panjakana sy fanimbàna ny firaisam-pirenena.” Averina indray, fomba ahoana no hanimbàn'ny solontsary iray ny firaisam-pirenena? Tahaka ny hoe izay sary rehetra azo adika ho manohintohina ny manampahefana dia azo enjehana noho ilay fepetra vaovao mahakasika ny kaontin'ireo mpampiasa aterineto daholp.
Ny politikan'ny varavarana tery no nosafidian'ny Aterineto Shinoa ary dia nihatery faran'izay haingana ny habaka firesahana ety anaty aterineto. Maro no nisafidy ny hampangiana ny adintsainy sy ny tahotra ananany.